Analamanga 2019 taranja volley ball ka lalao niisa 6 avy hatrany no nanombohana an’izany. Justice nandresy ny Meed seta 3 – 1 ; Pbzt nandresy ny Prm seta 3 – 0 ; Primature nandresy ny Dgfa seta 3 – 1 ; Menetp nandresy ny Meeh seta 3 - 0 ary ny Gn nandresy ny Ua seta 3 – 0. Marihana fa mahatratra ekipa 18 no mandray anjara amin’ity fiadiana ny ho tompondakan’ny volley Asoimi Analamanga 2019 ity ary hezahina ho vitaina mialohan’ny volana aogositra izao izany. Raha ny lojikan-javatra dia tokony hitohy amin’ny faran’ity faran’ny herinandro ity io fifaninanana io nefa mety hisy fitsarahana kely izany noho ny fiatrehana ny fetin’ny Pentokosta.